Kana iwe uri kutevera dzidziso, kana kungoita yakapusa chiito, iwe ungangodikanwa kushandisa iyo Command kiyi pane yako Mac. Kana iwe uri kunetseka kuti ndeipi kiyi iyo uye kupi kuti ungaiwana - kunyanya kana usiri kushandisa Mac keyboard - saka wauya kurudyi nzvimbo.
Chii chinonzi kiyi yekuraira?
Iyo Command kana Cmd kiyi (dzimwe nguva inonzi seiyi Apple kiyi) ndeimwe yeakakosha makiyi pane Mac keyboard.
Kiyi yekuraira inoshandiswa nekiyi kiyi kiyi yezhinji zviito zvakajairika zveMac: Command-C kuteedzera, Command-P kudhinda, Command-V kunama zvichingodaro.
Basa rayo rakafanana neCtrl paPC keyboard, asi Ctrl pane Mac keyboard ine yayo seti yezvinhu, saka izvo zviviri hazvichinjiki.
Iwe uchawana iyo Kiyi yekuraira padhuze neSpace bar Kune rimwe divi.
Iko kiyi yeMirairo inotaridzika sei?
Iyo yekurayira kiyi, yakanyorwa neCmd uye iyi quadruple loop chiratidzo: ⌘
Iyo icon yakagadzirwa naSusan Kare, weApple mushandi uyo akabatana nekambani muna 1982. Kare akamutora dhizaini dhizaini kubva kuSweden icon yemusasa.
Iyo Kiyi yekuraira yaimbove zvakare iine Apple logo pairi, asi Apple yakamira kusanganisira izvo imwe nguva yapfuura.
Iko kiyi yekuraira pane PC keyboard?
Uchishandisa PC keyboard ne Mac? Kana iwe uchitsvaga iyo yekuraira kiyi pane Microsoft khibhodi, kana chero isiri-Apple keyboard yechinhu ichocho, iwe unogona kuvhiringidzika kuti ndeipi kiyi yekushandisa. Haizove iyo Ctrl kiyi sezvo iyo kiyi inoshandiswa kune mamwe mabasa paMac, asi ndeipi kiyi iri?
Pane PC keyboard kiyi yekuraira ndeye iyo Windows kiyi kana iyo yekutanga kiyi.
Ndeupi musiyano uripo pakati peCmd neCtrl?
Pane Mac iyo Cmd kiyi inonyanya kutora chinzvimbo cheiyo Ctrl kiyi paPC. Pane PC Ctrl-S inoponesa, Ctrl-P anodhinda, zvichingodaro.
Kune vashandisi veMac pamwe kushandiswa kwakanyanya kweCtrl ndeyekufananidza kurudyi-kurudyi kana uchishandisa bhatani-bhatani kana track pad. Ctrl paMac zvakare ine zvimwe zvinobatsira maficha ayo kunyange.
Semuenzaniso: Kudzora-H kuchabvisa hunhu kuruboshwe nguva
Kudzora-D kuchabvisa hunhu kurudyi.
Kune mamwe matipi verenga edu Zvakakosha Mac keyboard mapfupi yemakiyi musanganiswa ane Alt / Sarudzo, Kudzora, Raira, Fn uye mamwe makiyi pane yako Mac keyboard.
Kana iwe uchida kuziva nezve iyo Sarudzo kiyi inoverengwa: Ndeipi kiyi Sarudzo pane Mac?
Tine denderedzwa kumusoro kweiyo akanakisa Mac keyboards.